Yola ၀ဘ်ဆိုက် ရေးနည်းလမ်းညွှန်
Yola website ရေးနည်း
Edit Menu ကို ဘယ်လို လုပ်မလဲ
yola ၀ဘ်ဆိုက်လေးကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ .. လွယ်လဲလွယ်တယ် . သုံးတဲ့သူတော့ တော်တော်ကို များတယ် . အခုပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် yola Menu အကြောင်းကို ရှင်းပေးပါ့မယ် . အားလုံးလဲ နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .. အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင် နားအလည်ဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းပေး ထားပါတယ် .. ပုံ(၁) ပြထားသလို New Page ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. သူက နှစ်မျိုး ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ် . တစ် မျိုးက web page သဘောမျိုးရေးခြင်းနှင့် Blog သဘောမျိုးရေးခြင်းပါ .. ရေးတာချင်းက တူညီပေမယ့် code တွေ ထည့်တဲ့နေရာမှာ အနည်းငယ် ကွာဟ သွားပါလိမ့်မယ် .. ပုံ(၂) မှာ ကျွန်တော် ပြထားပါတယ်.
မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို ရွေးပေးနိုင်ပါတယ် .. ပုံ(၂) မှာတော့ web page ပုံစံမျိုးနဲ့ ရွေးပြီး ရေးလိုက်ပါတယ် . ပုံ(၃) ကလိုမျိုး box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ် .. အင်္ဂလိပ်လို တစ်ခုခု ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ မိမိလိုချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုခုပေါ့ . ကျွန်တော်က အခု Poem ဆိုတာကို ရေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဖြည့်ပေးပြီးတာနဲ့ ok ကို နှိပ် လိုက်ပါ .
ပြီးသွားရင်တော့ ပုံ(၄) ကလို Edit Menu ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် ပုံ(၅) မှာ ပြထားတဲ့ မျှားနေရာလေးကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ .. အဲ့ဒီ့မှာတော့ မြန်မာ + အင်္ဂလိပ် လို နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ရေးလို့ရပါပြီ . (မှတ်ချက် . အင်္ဂလိပ်စာတော့ပါရမည် - ဥပမာ- Poem (ကဗျာ)) နားလည်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် .. ပုံ(6) မှာ ပြထားတဲ့ menu text ဆိုတာက Menu Bar မှာပေါ်မယ့် စာပါ .. ရင်ထဲက ကဗျာများ မဆိုတာကတော့ Pointer ထောက်လိုက် ရင် ပေါ်မယ့် စာသားပါ . ပုံ(၇) ကိုကြည့်ပါ .
C - box ဘယ်လို ထည့်မလဲ ..
ကဲ ပထမဦးဆုံး http://cbox.ws မှာ sign up လုပ်ပြီး c-box ရဲ့ Html code ကို သွားယူလိုက်ပါ .. c-box လုပ်နည်းကိုလည်း ဒီပို့စ်မှာ ဖော်ပြပြီးသားပါ . ဖတ်ကြည့်ပြီး cbox လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ အောက်မှာ ပြထားသလိုမျိုး Change Layout က မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ column ကိုရွေးပါ . ပုံ(၁) ကြည်ပါ .
ပုံ(၂) လိုမျိုး ဘေးမှာ column တစ်ခု ပိုလာပါလိမ့်မယ် ..
ပုံ(၃) မှာလို Html logo ပလေးကို မြှားပြထားသလို Drag content here နေရာကို ဆွဲလိုက်ပါ ..
ပုံ (၄) မှာလို Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ် .. ကျလာတဲ့ Box လေးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ရယူပြီးသားဖြစ်တဲ့ cbox့ html code ကို ထည့်ပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
ပုံ(၅) ကလိုမျိုး cbox လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. :P